» ‘नराम्रो सुनिएला तर कोरोना संक्रमित आए अस्पतालमा भागाभाग हुने स्थिति छ’
‘नराम्रो सुनिएला तर कोरोना संक्रमित आए अस्पतालमा भागाभाग हुने स्थिति छ’
९ चैत्र २०७६, आईतवार १८:३१
प्रस्तुत छ, डा. आचार्यसँग गरेको कुराकानी:
कागजमा त भयंकर देखियो, तर कार्यान्वयन शून्य । मैले अघि नै भनेँ नि सुरुमा आशंका गरिएका बिरामीलाई अस्पतालसम्म कसरी लैजाने त्यो तयारी हुनुपर्‍यो । त्यसपछि जाँच्ने चिकित्सक र एम्बुलेन्सका चालकलाई पीपीई अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । नमूना संकलन गरेपछि आशंकित संक्रमितलाई राख्ने छुट्टै क्वारेन्टाइनस्थल हुनुपर्‍यो । क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्दा सिकिस्त विरामीलाई राख्न पहिले अस्पताल चाहियो, अनि मात्र आईसीयू चाहिन्छ । प्रारम्भिक काम नगरी आईसीयू आईसीयू मात्र भनेर दौडिँदा कोही संक्रमित भेटिए भने यस्तै गल्तीले धेरै मानिसमा संक्रमण फैलिन सक्छ ।
त्यसैले कोरोनाको मात्रै उपचार गर्ने छुट्टै अस्पताल बनाउनुपर्छ । मैले रातारात नयाँ अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेको होइन । हामीसँग भएका अस्पताललका अरु बिरामी अन्यत्र सारेर त्यहाँ कोरोनाको मात्र उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा अन्य मानिसहरुलाई संक्रमण फैलिने डर हुँदैन । यसका लागि नेपाली सेना, प्रहरीको अस्पताल, कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पताल वा अरु कुनै अस्पताल छनोट गरौं र त्यहाँ भएका विरामीलाई अन्यत्र सारौं ।
कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पताल त ओपीडी मात्रै हो । त्यहाँ कोही विरामीलाई भर्ना गरेर राखिँदैन । त्यहाँ तीन वटा ब्लक छन् । सरकारले चाह्यो भने त्यहाँ क्वारेन्टाइन र आईसीयू बनाउन सक्छ । अन्य खाली भवन र केही मेडिकल कलेजहरुमा पनि कोरोनाको बिरामी राख्न भनेर बेडहरु थप्न सकिन्छ ।आईसीयू बेड तुरुन्तै तयार गर्न सकिन्छ ?
त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने तयारी भनेको आफैं भोलेन्टियरको काम गर्ने, कोरोनासँग सम्बन्धित उपचार कसरी गर्न सकिन्छ पढ्ने, बुझ्ने र सत्य तथ्य जानकारीहरु जनताहरुलाई दिने हो । मुख्य काम त सरकारले नै गर्ने हो । सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्‍यो भने त नागरिकहरुले आफ्नो काम गरिहाल्छन् नि । स्रोतः अनलाईनखबर